Mandrava ny Resaka Fady: Mampiaka-peo Manohitra Ny Hômôfôbia ny Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Mandrava ny Resaka Fady: Mampiaka-peo Manohitra Ny Hômôfôbia ny Toniziana
Voadika ny 01 Oktobra 2013 23:14 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Ελληνικά, Nederlands, English
Toniziana marobe no nandray ny solosainy mba hiresaka hanohitra ny hômôfôbia (fankahalana pelaka) taorian'ny kaonferansa voalohany momba ny fahapelahana notontosaina tao amin'ny firenena natao tamin'ny zoma (27 Septambra 2013) tao amin'ny minisiteran'ny Zon'olombelona ao andrenivohitr'i Tonizia. Notarihin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny psiklojia sy ilay manam-pahaizana Toniziana momba ny fananahana Haithem Sherif ny valandresaka. Tao amin'ny Twitter, nalaza ny teny ifankafantarana #TnGay. Nahazo laharana faha-dimy izany, toerana roa aorian'i Justin Bieber. Mafana tanteraka.
Pikan-tsary tao amin'ny Twitter misy ireo teny ifankafantarana malaza tamin'ny Asabotsy ( 28 Sept ).
Aza afangaro, fa ny andraikitry ny kaonferansa dia mandinika ny “fijerin'ny fianakiavana mikasika ny fahapelahana lasa aloha (mbola ankizy).” Nilaza ny mpikarakara ny kaonferansa fa tsy mamely ny fahapelahana ny valan-dresaka fa ny hanokatra adihevitra. Te hifandray amin'ireo mpanatrika ireo manam-pahaizana raha mandray anjara mavitrika amin'ny fametrahana soridalana ara-pananahana ho an'ny zanany ny fianakaviana. Indrisy, ora fohy taorian'ny fiafaran'ny kaonferansa monja dia voafafa ny pejy Facebook izay natsangana nandritra ny hetsika sady efa feno fanehoan-kevitra sy lahatsoratra momba ny lohahevitra.
Tsy nanakana ireo Toniziana haneho ny heviny momba ny lohahevitra izany. Maro ireo nampiasa Twitter mba hanala ny fahatezerany. Bilaogera Emna El Hammi nisioka tao anatin'ny tsy finoana [fr]:
Kaonferansa mankahala pelaka ao amin'ny minisiteran'ny zon'olombelona. Efa betsaka no hita tao amin'ity firenena ity.
Ny “normal” dia ny mahatsiaro salama tsara ara-batana sy ara-tsaina, ao anatin'ny fiarahamonina mijoro tsara sy MAHALEFITRA.
@dahkys nizara ny vinavinany ny amin'ny dikan'ny hoe “normal”:
Mpisera Twitter Toniziana hafa manana fomba fijery mifanohitra:
Lasa lavitra ianao izany. Firenena MIOZOLOMANA ity.
ary manontany ny Toniziana i Mocking Jay hahatsiaro ny [firenena] misy azy:
Nampiseho lahatsary momba ny fahapelahana lasa aloha ny kaonferansa, miaraka amin'ny minisitry ny zon'Olombelona sy ny Fitsarana tetezamita Samir Dilou. Monia Ben Hamadi nanatsonga ny tenin'i Dilou ary nilaza hoe:
Dilou: Ao amin'ny firenena Arabo izay Islamo ny finoany, ny fianakaviana dia lehilahy iray, vehivavy iray ary ankizy maro.
Nilaza indray ny fijeriny momba ny fahapelahana i Dilou. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2012 sy volana vitsy fotsiny taorian'ny nanendrena azy ho minisitra, nilaza momba ny fahapelahana ho “havetavetana ara-tsaina mila fitsaboana” izy nandritra ny tafatafa tamin'ny fahitalavitra. Niteraka fahatezerana teo amin'ireo vondrona LGBT ao Tonizia ny fanambarany tamin'izany fotoana izany.
Mpisera Twitter hafa nanome tsiny ny mpitondra Islamista, sy ny hevitr'izy ireo momba ny fahapelahana. Morsi CHAARI nisioka hoe [fr]:
Ny zon'olombelonan'ny Islamista dia ny zo amin'ny fiantrana, famindrampo, fahalalaha-tsaina, ny tsy fanaovana herisetra….amin'ny fitsaboana.
Nanampy ireo mpisera Twitter mpiaro ny zon'ny LGBT hisongadina ihany koa ny kaonferansa. Nanararaotra namaly ireo liana tamin'ny kaonferansa sy ireo manana hevitra tsy mitovy amin'izy ireo ihany koa ny @TNLGBT tonga namonjy ny kaonferansa. Mbola manafina ny momba azy ireo mpisera Twitter ireo noho ny teritery avy amin'ny olona sy ny herisetran'ny fanjakana manoloana ny fanaon'ny pelaka.
Sarotra ny mahita ireo fanehoan-kevitra rehetra ao amin'ny tambajotran'ny fiarahamonina mikasika ny lohahevitra tahaka izao, izay mbola fady ao Tonizia. Niresaka tamin'i Farah Samti, mpanao gazetin'ny Tunisia Live ary nanatrika ny kaonferansa ary manoratra matetika momba ny lohahevitra, ny Global Voices Online. Nanontany azy izahay raha nahomby ny kaonferansa ka niteraka adihevitra mahasoa isan-karazany momba ny lohahevitra. Tsy izany anefa hoy izy.
“Mino aho fa ny tanjona ambadik'izao kaonferansa izao dia angamba ny hanehoana fa nampahafantarina ny lohahevitra ary tsy resaka fady intsony izany. Saingy tsy dia nahomby ary tsy nilaina izany. Mandeha ila ilay izy ary tsy namaly ny fanontanian'ireo tsy mitovy fomba fijery aminy ireo mpandray anjara fitenenana, ” hoy izy namaly tao amin'ny Facebook.
Ampy ve ny firesahana ny lohahevitra, hoy ny sasany mety manontany. Sehatra mahomby hiresahana izany adihevitra izany ve ny tambajotran'ny fiarahamonina?
Tsia dia tsia. Mbola matahotra ny olona, mibaribary izany. Ary izany indrindra no antony maha-sarotra ny firesahana ny fiarahamonina LGBTQ manokana. Ary izany no antony mahatonga ny tambajotran'ny fiarahamonina ho fitaovana voalohany hanehoan'izy ireo ny heviny”, hoy i Samti.